Ahlu Quraan - Wikipedia
Ahlu Quran ama Qur’aaniyiin (; ) waa firqo kamid ah firqooyinka haysta diinta Islaamka waxayna aaminsanyihiin in kitaabka Quraanka ah oo kaliya uu yahay midka ay xaqa tahay in la raaco laguna dhaqmo. Waxay rumeysanyihiin in ay axaadiistu yihiin buugaag ay dad qoreen oo uusan Allah soo dajin islamarkaasna aysan kamid aheyn diinta islaamka. Waxay qabaan in axaadiistu yihiin baadil ayna tashwiish ku furayaan diinta saxda ah ee islaamka taasoo ah qur’aanka kariimka ah oo kaliya.
Firqooyinka diinta Islaamka ee ah Sunniyiinta, Mahdavia, Ahl al Quran, ghair madhhabi, Ahmadiyya, Ibadi, Shiica, iyo Suufi.
Inkastoo ay dad badani ugu yeeraan qur’aaniyiin misane iyagu isuguma yeeraan sidaas waxayna isu yaqaannaan in ay yihiin Muslimiin kaliya. Waxay yiraahdaan firqo ma nihin magac gooni ahna ma lihin ee waxaynu nahay Muslim. Asalka caqiidadoodu waxay ku saleysantahay kitaabka qur’aanka ah waxayna rumeysanyihiin in uu Allah kitaabkiisu dhameystiranyahay uusanna u baahneyn xadiis in lagu kabo ama lagu fasiro.
Doodoodahooda ugu waaweyn waxaa kamid ah in axaadiista la qoray geeridii nabiga kadib muddo ku dhow sadex boqol oo sano, in axaadiista ay ka buuxaan afkaaro aan waafaqsaneyn qur’aanka iyo caqliga saliimka ah ee aadanaha, in ay qur’aanka dhexdiisa ku caddahay in uu qur’aanku dhameystiranyahay fasirkiisuna uu fududyahay sidaas darteedna aysan jirin sabab loogu tiirsanaado axaadiis ama sheekh ama iimaam iyo wax lamid ah.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahlu_Quraan&oldid=200869"
Last edited on 12 May 2020, at 11:24
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 12 May 2020, marka ee eheed 11:24.